कसरी लाग्छ लाग्छ विष ? - Everest Dainik - News from Nepal
कसरी लाग्छ लाग्छ विष ?
काठमाडौं । विष एउटा केमिकल प्रतिक्रिया हो, जुन शरीरमा प्रवेश गरेमा स्वास्थ्य प्रणालीमा अवरोध ल्याउँछ । जुन प्राणीका लागि निकै घातक हुन्छ ।
-सामानयतया, विष सेवन गरेमा यसले शरीरमा असर गर्छ । त्यस्तै, श्वास र छालाको माध्यमले, सर्प तथा अन्य जीवको टोकाइ, विषालु च्याउको सेवन, कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषादीको सम्पर्कमा आउँदासमेत विष हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ ।
-कतिपय अवस्थामा आत्महत्या गर्ने वा मार्ने उद्देश्यलेसमेत कतिपय विषालु पदार्थ प्रयोग गरिन्छन् । आत्महत्याको उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइने फस्फोरस, अल्मुनियम, फस्फेट र सल्फसजस्ता विष निकै घातक हुन्छन् । यस्ता विषजन्य पदार्थ दुर्घटनावश पनि प्रयोगमा आउन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस रामदेवका मुख्य सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई कसले खुवायो विष ?
-विष शरीरमा पुगिसकेपछि तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउँछ । वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने ,पेट पोल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने वा छिटो–छिटो चल्ने, मुटुको धड्कनमा गडबडी आउनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
-शरीरमा फरक–फरक विषका लक्षण फरक–फरक देखिन सक्छ । शरीरमा अनावश्यक दुखाइ उत्पन्न हुने गर्छ । रगतमा विष मिसिएर शरीरभरि नै प्रतिक्रिया देखिन्छ ।
-कडा विष भएमा मानिसको तुरुन्तै मृत्यु हुन्छ भने कतिपय विषको असर मन्द देखिन्छ ।
-मिर्गौलाले काम गर्न छाड्ने, दिमागमा सीधा असर पर्ने, स्ट्रोक र हृदयाघात हुने, आन्द्रामा पूर्ण रूपमा अवरोध आउने, एपेन्डिक्समा समस्या हुने, कलेजोमा असर पुग्ने, श्वास–प्रश्वास तथा रोकिनेजस्ता असर देखिन्छन् ।
-कुन विष प्रयोग भएको भन्ने थाहा नहुँदासम्म लक्षणका आधारमा उपचार गरिन्छ । विष पत्ता लागिसकेपछि विशेष उपचार प्रयोगमा ल्याइन्छ
याे पनि पढ्नुस सोना बिरहीको लोकदोहोरी गीत ‘विष’ सार्वजनिक (भिडियो)
-यदि मर्ने–मार्ने उद्देश्यले विष प्रयोगमा ल्याइएको हो भने अर्थात् कडा खालका फस्फोरस र सल्फासजस्ता औषधिको प्रयोग गर्दा अधिकांश मानिसको मृत्यु हुने गर्छ ।
-कम जोखिमपूर्ण विषको असर भए, उपचारको माध्यमले बचाउन सकिन्छ । यसका लागि सकेसम्म छिटो स्वास्थ्यसंस्था पु(याउनुपर्छ । विभिन्न औषधिको माध्यमबाट विषको असरलाई कम गर्न सकिन्छ ।
-कुन विष प्रयोग भएको हो भन्ने थाहा नहुँदासम्म लक्षणका आधारमा उपचार गरिन्छ । विष पत्ता लागिसकेपछि विशेष उपचार प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
उपचारपछि पनि असर
-विषालु जनावरको टोकाइ, विषाक्त खानेकुरा र विषादीको सेवनका अवस्थामा उपचारपछि पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन पनि सकिन्छ । धेरैजसो विषले दीर्घकालीन असर पार्दैन । तर, कडा विषको असर तत्काल समाधान भएन भने त्यसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ ।
-जानाजान प्रयोगमा ल्याइएका कडा खालका विषले स्वास्थ्यमा धेरै क्षति पुयाउँछ । जस्तै, मिर्गौलामा समस्या, कलेजोले काम गर्न छाड्ने, दिमागमा समस्या भइराख्ने, मस्तिष्क क्षमतामा कमजोरी आउने तथा मुटुमा समस्या देखापर्ने हुन्छ । यस्ता विषको असर पछिसम्म रहिरहन्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुँदै जान्छ । यो सामाग्री नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।